यस कारण दुई नम्वर प्रदेशमा एमाले ‘एक नम्वर’ - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
यस कारण दुई नम्वर प्रदेशमा एमाले ‘एक नम्वर’
- मिना श्रेष्ठ
पार्टीको गरिमा सगरमाथाको उचाइमा पुगेको बेला पनि सोचे जतिको परीणाम आउन सकेन । अहिले आएको परीणाम भन्दा निकै राम्रो परीणाम आउनु पर्थ्यो ।
बीस बर्ष पछी चुनाव हुन्छ कि हुदैन भन्ने शंका उपशंका को बिचमा,चुनाव लाई विभिन्न बहानामा सार्न खोजिए पनि, कतिपए स्थानहरुमा धाँधली गरीए पनि मतपत्र च्यातचुत कार्यक्रम भएको स्थान चितवनको भरतपुर बाहेक तीन चरणमा बिभाजन गरीएको पहिलो र दोश्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । अब तेस्रो चरण को निर्वाचन पनि राम्रो अवस्थामा सम्पन्न हुनेछ । दुई चरण को सम्पन्न भएको ठाउँमा धमाधम स्थानीय सरकार बन्दै छन । बर्सौ देखि थन्किएको जनताका कामहरु, बिकाशका कामहरु सुरु हुन थालेको छ । निर्वाचन सम्पन्न स्थानहरुका महानगर, उपमहानगर ,नगर ,गाउँ र वार्डमा कार्यालय स्थापना देखि जनताको काम, बिकासका काम सुरु भैसकेको छ ।
निर्वाचनमा सबै खाले परीस्थिती का बाबजुद पनि देशै भरीको चुनावी परीणाममा नेकपा एमाले पहिलो पार्टी भएको छ । छ वटै प्रदेशमा नेकपा एमाले पहिलो पार्टी भएको छ । गत आइतबार बालकोट अध्यक्ष निवासमा बसेको स्थायी समितिको बैठकले केक काटेर खुशियाली पनि मनाएकोछ । बीस बर्ष पछी मात्रै देश चुनावी माहोलमा गएको कारण हुन सक्छ, पार्टीको गरिमा सगरमाथाको उचाइमा पुगेको बेला पनि सोचे जतिको परीणाम आउन सकेन । अहिले आएको परीणाम भन्दा निकै राम्रो परीणाम आउनु पर्थ्यो ।
अब असोज दुई गते हुने तेस्रो चरण को निर्वाचनमा पनि नेकपा एमाले नै पहिलो पार्टी हुनेछ । मधेस बिरोधि भनेर हावा कुरा फैलाए पनि, मधेसका जनताको बीच अनावश्यक भ्रम छरे पनि त्यही क्षेत्रका जनताले बुझेका छन् , यो देश मात्रै नेकपा एमाले ले बनाउन सक्छ । नेकपा एमालेले मात्रै सिङ्गो नेपाल को बिकास गर्न सक्छ । नेपालीको स्वाभिमान को धरहरा जोगाइराख्छ । ब्यापार , कृषि , शिक्षा , स्वास्थय सबै क्षेत्रको बिकास नभै मुलुकको बिकास सम्भब छैन र मधेस को बिकास नेकपा एमाले ले नै गर्छ । तसर्थ आम जनसमुदायले नेकपा एमाले लाई सुर्य चिन्हमा मतदान गरेर पुनः पहिलो पार्टी बनाउनेछन् । नेकपा एमालेले बिकास मात्रै भन्दैन उत्पादन र उत्पाकदत्वको वृद्धि सगै त्यसको सहि उपयोग र समुचित बितरण हुनपर्छ पनि भन्छ ।
आफ्नै शिरको टोपी आफ्नो इच्छाले पहिरिन नपाउने, आफ्नै काधको गम्छा आफ्नो इच्छाले ओढ्नु नपाउने थिति लाई बदल्न चाहन्छ । आफ्नै घर को झ्याल कस्तो राख्ने छान्न नपाउने बिभेदकारी दमनकारी नियम हरु हटाउन चाहन्छ ।
देशभरी अधिकार को बितरण गर्दा जनता सार्वभौम हुन भन्ने कुरा आत्मसात गर्नु पर्छ । अवसर, सम्मान र सुरक्षा सबै ले उत्तिकै पाउन पर्छ । उत्तिकै हैसियतका साथ ती उपलब्धि हरुको प्रयोग या उपभोग सबैले हुनपर्छ । नेकपा एमाले आफ्नै शिरको टोपी आफ्नो इच्छाले पहिरिन नपाउने, आफ्नै काधको गम्छा आफ्नो इच्छाले ओढ्नु नपाउने थिति लाई बदल्न चाहन्छ । आफ्नै घर को झ्याल कस्तो राख्ने छान्न नपाउने बिभेदकारी दमनकारी नियम हरु हटाउन चाहन्छ । नेकपा एमाले देश बाट गरीबी र पछौटेपन को अन्त गर्ने अभिभारा राख्छ । उसले कुन भूगोलको ? , कुन जातको ? कुन आस्थाको ? भनेर विभेद गर्दैन । नेकपा एमाले सिचाइको सुबिधा सबै कृषिजन्य ठाउँमा पुर्याउनु चाहन्छ ।
आफ्नो सरकारको पालामा पुर्व पश्चिम फास्ट ट्र्याक बनाउने , हाइवे लाई चार लेन को बनाउने, चतरा देखि हेटौंडा सम्म । सदरमुकाम सहरीकरण लाई चार करोड छुट्याएको । जनता आवास कार्यक्रम अन्तरगत बीस हजार घर एक बर्ष मा बनाएर दिने योजना सुरु भैसकेको छ । अत्यन्तै गरीब गरीबीको रेखामुनि का होइन , गरीब को रेखा नै नदेख्ने गरीको गरीबहरु लाई जनता आवास को ब्यवस्था गरीने भएको छ । दलित र लोपोन्मुख जातिका छोराछोरी लाई उच्च शिक्षा सम्म निशुल्क अध्यन को ब्यवस्थापन गरेको छ । हरेक प्रदेशमा एउटा बिश्वबिद्धालय स्थापना हुनपर्छ भन्ने तराई बन्न पर्छ मधेस बन्न पर्छ भन्ने उदेश्यका साथ देश को हितको पक्षमा, सामाजिक सदभाबकि पक्षमा, देश को समृद्धि को पक्षमा कसै प्रति कुनै संस्था प्रति कुनै आग्रह पुर्वाग्रह नराखिकन नेकपा एमाले ले निति तथा कार्यक्रम ल्यायको थियो ।
विभिन्न समाचार माध्यम बाट विभिन्न खाले सूचना जानकारी आइरहेको छन् । एमाले लाई हराउन एमालेको बिजयलाई रोक्न सरकारको नेतृत्व गरीरहेको नेपाली कांग्रेस र राजपा को बिच शान्ति सुब्यवस्था भड्काउनु सहमति गरेको कुरा सुन्नमा आएको छ । एमाले को बिजयलाई रोक्न सहज नभएको भन्दै पैसा मागेर ल्यायर भए पनि पैसाले सबै खाले हतकन्डा अपनाउने भोट किन्ने देखि आतंक मच्चाउने समेत को तयारी गरेको पाइएको छ । आवश्यक जायज नाजायज सबै काम गर्ने सहमति भएको सुन्नमा आएको छ । दुई नम्बर प्रदेशको आठ वटै जिल्लामा शान्ति भड्काउने देखि पैसा बाड्ने सम्म को योजना बनाए पनि , साम्प्रदायिक विभेद हटाएर देशको समृद्धिको निम्ति कुनै जातीय साम्प्रदायिक सेन्टिमेन्टमा , कुनै भावावेशमा नआइकन अग्रगामी सकारात्मक बिकासको लागि दुई नम्बर प्रदेशका ६५ लाख जनताले नेकपा एमाले लाई चुन्नेछन ।
देशको माटोको माया गर्न , मधेसलाई देश बाट नटुक्र्याउनलाई पनि दुई नम्बर प्रदेशमा नेकपा एमालेलाई जिताउने छन् । सुर्यको पुजा आराधना छैठी माताको पुजा गरीने प्रदेशमा आम जनताले सुर्यको पुजा गर्दै सुर्य चिन्हमा मतदान गर्नेछन् । त्यहाँ सुर्यको जित हुनेछ ,नेकपा एमालेलाई जिताउने छन् । तराई मधेसका जनताले आफ्नो ठाउँमा उन्नति र प्रगति को थलो बनाउने एमाले नै हो भनेर चिनी सकेको छन् । तराई मधेस मा लोकतन्त्र प्रति आस्था राख्ने सबैले एमाले लाई नै सुर्य चिन्हमा मतदान गर्नेछन् ।
फ़ेरि पनि नेकपा एमाले पहिलो पार्टी हुनेछ । दुई नम्बर प्रदेशमा जनस्तरबाट चुनावी अभियान शुरु भैसकेको छ । यो पटक अरु प्रदेश को भन्दा अझै धेरै फराकिलो मतान्तरले पहिलो पार्टी बन्नेछ । मधेसका जनप्रतिनिधि हरुको सफल कामले हुन गइरहेको प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनमा पनि सकारात्मक प्रभावले पुनः जनताले सुर्य चिन्हमै मतदान गर्नेछन् र नेकपा एमालेको बहुमतको सरकार बन्नेछ अनि देशले यथार्थमा काचुली फेर्ने छ । के पि ओलि सरकारले बनाएका अधुरा बाँकी योजनाहरु पुरा हुनेछ ।
लेखिका नेकपा एमाले युवा तथा खेलकुद बिभाग केन्द्रिय सदस्य हुन् ।